Dhuusomareeb: shan wariye oo dib xoriyaddooda u helay
August 3, 2015 (GO)- Shan wariye oo muddo 48 saacadood ah ku xirnaa degmada Dhuusomareeb ayaa xalay damiin lagu sii daayey.
Wariyeyaashan oo wakiillo u ah idaacado iyo telefishino isugu jira maxalli iyo caalami, waxaa xabsiga dhigay saraakiisha Ahlu Sunna, kadib markii lagu soo eedeeyey inay tebiyaan war been abuur ah oo ku saabsan in degmada Dhuusomareeb lagu qabtay dibadbax lagu taageerayo maamulka Galmudug.
Shanta wariye waxaa lagu kala magacaabaa: Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, Bashiir Sanka, Cabdi Jamaal Macalin Axmed, C/laahi Warsam Rooble, Nafiso Xersi Oogle, Leylo Nuur Cilmi.
Nafiso Oogle oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in mid kamid ah wariyeyaasha la xiray uu xabsiga dhexdiisa ku xanuunsaday balse hadda xaaladiisu wanaagsan tahay.
Ku dhowaad toban wariye aya saddexdii bilood ee ugu dambeeyey lagu xirxiray isla degmada Dhuusomareeb, arrintaas oo ururada xuquuqda warbaahinta u ololeeyaa si weyn u cambaareeyeen.
Saraakiisha Ahlu Sunna ayaa sidoo kale warbaahinta deegaanada ay maamulaan ka hawlgasha waxay ku amreen inaysan tebin karin wararka ku saabsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ee dhowaanta degmada Cadaado lagu dhisay.